Myanmar: Militariga oo wali gubaya tuulooyinka Rohingya (Warbixin cusub HRW) – Kasmo Newspaper
Myanmar: Militariga oo wali gubaya tuulooyinka Rohingya (Warbixin cusub HRW)
Updated - December 21, 2017 3:05 pm GMT
London (Kasmo), Militariga Myanmar ayaa dab qabadsiiyay guryo badan oo qowmiyadda Rohingya oo ku yaallay 4 tuulo, wax yar ka dib markii dalka Bangladesh lala saxiixday heshiis ku saabsan soocelinta qaxootiga.
Human Rights Watch waxay u aragtaa in heshiiskii 2da dal ee la saxiixay 23kii Nofember yahay mid is tustus ah oo aan waxba ka jirin, muuqaallada Satellite-ka ee Hay’adduna waxay muujinayaan tuulooyinka Militarigu gubeen dhammaadkii Nofember iyo bilowgii Disember.
Sida ku xusan Warbixinta HRW ee 19kii Disember 2017, Tuulooyinka Rohingya ee la gubay ilaa dhammaadkii Agosto waxay gaarayaan 354, marka lagu daro 40 kale oo la gubay intii u dhexaysay Oktoobar iyo Nofember, waxay ka dhigaysaa tirada guud 394 tuulo.
Burburinta 40ka tuulo oo Satellite-ka lagu qaada, 25kii Nofember ilaa 2dii Disembar oo ku beegan markii heshiiska la saxiixay ka dib, waa mid aad u culus, waayo waxay muujinaysaa sida dadaalka Xukuumadda Myanmar ku xoojinayso soo-noqosho badqabta ee qaxootigu u tahay sheeko been ah.
Brad Adams, Agaasimaha Human Rights Watch ee Asia ayaa ka rajaynaya Golaha Ammaanka in cunaqabatayn lagu soo rogo Xukuumadda Myanmar ee inkiraysa xauuqa iyo barakicinta ka soconaysa Gobolka Rakhine.